पोर्चुगलमा आइआरएस भर्ने मिती नजिकिँदै, किन भर्ने यो, के काम लाग्छ ? « Sansar News
पोर्चुगलमा आइआरएस भर्ने मिती नजिकिँदै, किन भर्ने यो, के काम लाग्छ ?
४ चैत्र २०७६, मंगलवार १५:५७
यदी तपाईंहरु २०१९ मा पोर्चुगल आएर फिनन्सा नम्बर लिनु भएको हो भने अन्तिम डिसेम्बर २०१९ नै किन नहोस् तपाईंले IRS भर्नु होला, किन भने सरकारले सोसियल प्लस स्किमबाट कम आई आर यस् भएको लाई बर्षभरी मेट्रो बस पासमा छुट दिन्छ । त्यस्को लागि यो IRS फ्रुप पेपर अनिवार्य हुन्छ ।
परिवार डिपेन्डेन्ट अप्लाई गर्नको लागि पनि यो आई आर यस् पेपर अनिवार्य हुन्छ ।
बैंकमा लोन अप्लाई गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि आइ आर यस प्रुफ अनिवार्य हुन्छ ।
घर कन्ट्रयाक्ट लिन लाग्दा पनि यो कागज खोज्छन धेरै ठाउँमा ।
तपाईको बर्षभरीको आर्थिक गतिबिधी सिस्टमले साइमुलेसन गर्छ र कसैलाई फिर्ता पैसा पनि आउछ, कसैलाई केही तिर्नु पर्ने आउछ र कसैको बराबर आउछ । हाम्रो कामसँग जोडिएको तलब, हाम्रो कमाइ, हाम्रो खर्च जुन हामीले फातुरा लिएर गरेको छौ त्यो सबै सिस्टमले अटोमेटिक हिसाब गरेर निकाल्छ । र त्यो कागज तपाईंको २०२० भरी धेरै कुरामा काम लाग्छ ।
अब अप्रिल १ बाट जुन ३० सम्ममा आई आर यस् भर्न मिल्छ, पोहोर साल त मैले धेरै जनाको भरेको थिए, केही साथीको ११०० युरोसम्म पनि फिर्ता आएको थियो । यो पाली पनि म सिकाउने छु आँफै भर्न पनि अथवा कन्फ्युज हुनु भयो भने आउनु होला म गरिदिने छु । त्यस्को लागि चाहिने फिनान्साको पासवर्ड लिएर बस्नु होला । धन्यवाद ।